तारेभिर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा : मुख्यमन्त्री पौडेल - Gokarna News from Nepal
"सरकारले कुरा मात्र गरेर भएन काम गर्नु प¥यो''
काठमाडौं – गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ३ स्थित रहेको तारेभिरमा छौठौं तारेभिर पर्यटन महोत्सव आजबाट सुरु भएको छ । वागमती प्रदेश,गोकर्णेश्वर नगरपालिका,बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाकाको आर्थिक सहयोगमा तारेभिर महोत्सब कार्यसमितीको आयोजनमा आज र भोली महोत्सब चल्ने तारेभिर महोत्सब कार्यक्रमका संयोजक हर्क बहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
संयोजक तामाङका अनुसार आफ्नो गाँउको पहिचान र चिनारीका साथै गाँउलाई सामाजिक आर्थिक र धार्मीक रुपमा समेत उजागर गर्न महोत्सब महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए । महोत्सवमा स्थानिय व्यापार,व्यवसाय, स्थानिय परिकार र कृषि क्षेत्रका उत्पादनहरु स्टलमा रहनुका साथै स्थानिय कलाकारले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै विभिन्न प्रस्तुती दिने संयोजक तामाङको भनाई छ ।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले तारेभिर पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले तारे भिरलाई पर्यटनको मुख्य आर्कषक र गन्तव्य बनाउन थप सुधार र व्यवस्थापन गर्न सके लाखौं पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने बताए । उनले भने ‘सरकारले लिएर भम्रण बर्षको लक्षलाई पुरा गराउने जिम्मा हामी सबैको हो । वागमती प्रदेश यस्तै नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गर्दै विकास गर्ने कार्यमा लागेको छ । त्यस मध्ये तारेभिलाई पनि पर्यटकीयको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागी तारेभिरका विशेषता, भौतिक पूर्वाधार तयार,स्थानिय संस्कृती कला, भाषासँगै होम स्टे र रिसोटका अवधारणा अगाडी बढाउनु पर्छ ।’
मुख्य मन्त्री पौडेलले महोत्सवले आर्थिक समृद्धीको बाटोमा समेत सहयोग पु¥याउने भन्दै सामाजिक,संस्कृतिक पाटोलाई उजागर गर्दै स्थानिय मौलिक कला र संस्कृतीको जर्गेना गर्ने दाहित्व स्थानियको भएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार स्थानियको घर घरमा पुगेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने ‘वागमती प्रदेश घर घरमा पुगेको छ , योजनाका पूर्वाधार अगाडी बढाएको छ । महत्वपूर्ण नीती बनाउने देखी विकास निमार्णका कार्यलाई महत्वका साथ राखेर अगाडी बढिरहेको छ । दिर्घकालिन नीतीहरु अगाडी सारेको छ । सरकारले लिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउने छ ।’
उनले केन्द्र प्रदेश र स्थानिय सरकार ३ तिर फर्केर होइन, एकै ठाँउ मिलेर समन्वय गरेर अगाडी बढे देश आर्थिक समृद्धीमा ठुलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राईले महोत्सवले जनताका आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक विकास र समृद्धीसँग जोड्न भुमिका खेल्नु पर्ने बताए । उनले
१ दिन आएर भाषण गर्ने, एक दिनलाई सिमित राख्ने मात्र नभई पर्यटन सम्भावना बोकेको तारेभिरलाई पर्यटकिय गन्व्यको रुपमा बनाउन सबै लाग्नु पर्ने बताए उनले भने ‘एक दिनलाई मात्र सिमित नगरौं, एक दिन आएर कार्यक्रम गर्ने भाषण गर्ने मात्र नभई अगामी दिनमा समृद्धीका कार्यक्रम अगाडी बढऔं ।’
सांसद राईले यस क्षेत्रका तामाङ जातीेले हिजोको जस्तो जीवन शैली मात्र राखेर नहुने भन्दै, नयाँ सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रको विकास गर्न स्थानिय जागरुक भएर लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेका नेता डा.प्रकासरण महतले तारेभिर काठमाडौंबाट नजीक रहेर पनि भौतिक संरचना र वाटोको कारण पछि परिरहेको बताए । उनले तारेभिर पर्यटकिय गन्तव्यको महत्वपूर्ण ठाँउ रहेको बताउँदै यसको विकास र प्रसारमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । ‘तारेभिर ्अत्यन्तै रमणीय ठाँउ छ । पर्यटकिय महत्व ज्यादा छ ’ उनले भने ‘ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने वतावरण वनाऔं। साहशिक पर्यटकको लागी तारेभिर माउज्न्ट क्लाविङ रुट उपयुक्त छ । ’
नेता महतले यस क्षेत्र आर्थिक रुपमा समेत पछौटे पनले गाजेको भन्दै यस क्षेत्रलाई विकास गर्न सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।
फरक प्रसङ्गका नेता महतले सरकार आत्मकेन्द्रीत भएको भन्दै जनता केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘सरकार आत्मकेन्द्रीत भयो । जनता केन्द्रीत देखिएन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले जनतालाई छुनु प¥यो । सरकारले कुरा मात्र गरेर भएन काम गर्नु प¥यो ।’
उनले मुख्यमन्त्रीले घर घरमा प्रदेश सरकार पुगेको भाषण गरेको भन्दै त्यसको महसुस जनताले नगरेको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार घर घरमा पुग्यो भन्नुभयो तर जनताले खै आभास गरेको ? केन्द्र होस वा प्रदेश सरकारले स्थानिय तहमा रकम पठाउदा समेत विभेद गरेका छन । आफ्ना मान्छे राख्न पाए रकम पठाउने नत्र नपठाउने प्रवृती हावी भएको छ । त्यसरी विकासमा जनतालाई भेदभाव गरेर वजेट पठाउन मिल्छ ? यस्तो मानसिकताले देश समृद्ध हुन सक्दैन । ’
नेता महतले नेकपा सरकारले राष्ट्रिय सम्पती व्यक्तीलाई सुम्पीदै गएको भन्दै त्यसमा जनताको निरन्तर खवरदारी आवश्यक रहेको औल्याए । जनताले खवरदारी नगर्दा सरकारले बाटो भल्दैछ उनले भने ‘सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन खवरदारी जरुरी छ । स्थीर सरकार भन्या छ तर एउटा सभामुख दिन सक्या छैन । संसद महिनौ दिन हुन लाग्यो बन्धक छ । यसरी संसदनै वन्धक वनाएर नेकपाले संसदलाई छायामा राखेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको कुरा हो ।’
त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले तारेभिरलाई पर्यटकीय गन्व्यका रुपमा विकास गर्र्न नगरपालिकाले योजना बनाएरै अगाडी बढेको बताए । उनले तारेभिरमा
माउन्ट क्लाइविङ रुट सँगै तारेभिर माथि शिवको ठुलो मुर्ती समेत बनाउन लागिएको जानकारी दिए । मेयर चालिसेले तारेभिरबाट काठमाडौं उपत्यकाको मनोरश दृश्य हेर्न सकिने भन्दै पर्यटकका लागी तारेभिर आर्कषक गन्तव्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्घाटन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्धारा गरीने भनिएपनि अध्यक्ष कार्य व्यस्तताले महोत्सवमा जान नभ्याएपछि मुख्य मन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए ।
उद्घाटनमा प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख शान्ती नेपाल वौद्धक्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठ,स्थानिय जनप्रतिनिधि लगाएतको
समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
महोत्सवमा स्थानियहरु आफ्नो जातिय भेषभुषामा सजिएर महोत्सवमा देखिएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न कलकारहरुले सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा तारेभिर महोत्सव समितिका अध्यक्ष हर्क बहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री पौडेल सहितका अतिथीहरुलाई तारेभिरको तस्वीर मायाको चिनोको रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
महोत्सव भोली पनि चल्ने तारेभिर महोत्सव आयोजक समितिका सचिव मान बहादुर तामाङले जानकारी दिए । महोत्सवमा स्थानिय परिकारका विभिन्न स्वादहरु लिनुका साथैै स्थानिय भेषभुषा र सांस्कृतीक नाचहरु समेत हेर्न सकिने छ ।